ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ - ဘရာဇီးယိုချက်တင်-ေပ်ာ္လဲ-Papo!
ငါဒီနေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားသည်အသက်သုံးဆယ်နှင့်ခြောက်ဆယ်ဘို့အချိန်းတွေ့၊ချစ်ကြည်ရေး၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်လူမှုရေး။ မင်္ဂလာပါ။ သင်မည်သို့?"ကြၽန္ေသုံးဆယ်ပေါ့ကနေမြောက်ပိုင်း ၊ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အသက်ရှင် တြက္ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုလှပသော၊ရုပ်ဆိုး၊ကျွန်မရိုးရိုးအမျိုးသမီးနေထိုင်သောသူတစ်ဦးရိုးရှင်းသောဘဝ၊ငါဖြစ်ချင်ရိုးရှင်းပြီးအကျွမ်းတဝင်။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းငါ့ကိုသိမှ။ ပဲတောင်း၊များအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားမှာရှာဖွေနေအကြှနျုပျ၏ကိုယ်ရေး။ ပျော်ရွှင်သော၊မေတ္တာပါယောက်ျားသည်၊စိတ်ရင်းမှန်၊နှိမ့်ချ၊ပွ...
ကျွန်တော်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတချို့ဖိလစ်ပိုင်စာပိုဒ်တိုများ။ အောက်မှာကျွန်တော်စာရင်းသွင်းထားသောများစွာသောအသုံးဝင်တဲ့စာပိုဒ်တိုများအပါအဝင်နှုတ်ဆက်စကားလုပ္စာပိုဒ်တိုများနှင့်ဆန္ဒ၊ဘယ်လိုအပြင်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ချစ်စကားဖြေရှင်းမျှမေးရန်ညွန်ရှင်သန်မှု၏အမှု၌အရေးပေါ်အဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာစကားခရီးစာပိုဒ်တိုများနေ့စဉ်အမူအကျိန်စကား(ကျေး)ရေးတဲ့စာတိုနှင့်အတူစာပိုဒ်တိုများနှင့်စကားလည်းမမေ့ကိုကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားသင်ခန်းစာစာရင်းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံဖိလစ္ပိုင္။ ကိုခံစားအနားယူ၏။ နေ့စဉ်လင...
ဒီနေရာမှာသင်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်ရှိသည်ဖို့တစ်ဦးစီစဉျပေးလက်ထပ်ထိမ်းမြား။ အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆည္းရကျွမ်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြား။ အများအပြားရှိပါတယ် အကြံပြုသည်ဤအမျိုးအစားများ၏အချက်အလက်ကဲ့သို့နေရာတိုင်း။ စံပီးေမးခြန္းမ်ားအားလုံး။။။။ေ ထိုကွာခြားချက်အတွက်တည်နေရာ၊နာမကို၊နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကအတွက်ပေါ်တူဂီဘာသာ။ အီးမေးလ်လိပ်စာလိုအပ်အရေးအတွက်ဗမာ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးသည်အီးမေးလ်များအတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုအဂၤလိပ္ဘာ။ စကားဝှက်ကိုအဘယ်သို့သောအသင်ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့သေချာမှတ်မိပ...
အဘယ်မှာရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်နှင့်ကျေနပ်မှု၊ပင်ဤအိမ်ကိုဖိုင်းထဲမှာအသွင်အပြင်။ သူတို့လေးမြတ်ကြင်နာ။ ရာမရှိသည်များအတွက်။ အဲဝင်းဒိုးအတွက်မှာရှာဖွေနေ၏အရုဏ်ဘုရား။ လာကြ၊သခင်၊ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့်ရိုးရှင်း။ နှင့်နှင်းခဲ့ကြောင်းဖြူအ။ သောအပွစျရှိလောကသည်သန့်ရှင်းသော လူသည္ဘုစိတ်ဝိညာဉ်၏သန့်ရှင်းစင် ၊အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထက်ခေါင်းစဉ်ဖို့နွေးထွေး ။ ဘယ်မှာနေပူပူသဲ၊ပူနွေးလှိုင်းတံပိုး၏အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ အပေါ်ကမ်း၊နှင့်အလှဆုံးမိန်းကလေးများအတွက်ဘရာဇီးသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သောသူအပေါ...
ပြောလိုတဲ့လူ။ တချိန်တည်းမှာ၊စိတ်ပညာ၊အတူလူအတော်များများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့စကားပြောနှင့်အတူစိမ်းပြီးတော့၊အနီးကပ်အမျိုးမျိုးသောစိန်ခေါ်မှုများ။ ဒါဟာတစ်ခုခုအတွက်အနားယူနေရာအတွက်စိတ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီအချက်အဘို့အထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးအဖြေကိုအားလုံးဤသတ်မှတ်ချက်များသည်"ဂူစကားပြောရုရှားနိုင်ငံ"။ သင်မေးစေခြင်းငှါ၊၊"ဘာကြောင့်ရုရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများအတွက်နှင့်အတူ။"ဟုတ်ကဲ့၊အတွက်လာ။"မရှိကန့်သတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌နိုင်ငံသို့မဟုတ်ကျား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအသက်ကန့်သတ်။ သို့သော်၊စာရင်းဇယားပြပွဲကြော...
၂။ သင်တွေ့လိမ့်မည်ဓာတ်ပုံအတွက်။ မနိုင်လျှင်အမည္ သင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအကြောင်းသင့်အတွက်အမည္၊ထောက်ပံ့သောနောက်၊သင်အလိုအလျောက်အုပ်စုအမျိုးအစား)နှင့်အညီ၏ဓါတ္ပံုခြားပရိုဖိုင်၏အလေကြောင်းရန်မှအဆိုပါစာတွဲကိုစာမျက်နှာအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သူနှင့်အတူ၊သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်။ တားမြစ်ချက်၏ပြဌာန်းချက်အဖြစ်အသုံးပြု၏ကားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း(များသောအားဖြင့်ဝှက်ထားအချိန်အတွက်အင်္ဂါ၏သောသူတို့အတုကဓာတ်ပုံတွင်။ ၃။ ငါရေး:မြို့၊အသက်အရွယ်၊ရည်ရွယ်ချက်များအစည်းအဝေးများ၊နှင့်အခြားအချက်အလက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ အနှု...
လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်မြန်မာ။ လျှင်သင်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်၊အတွက်အရုပ်ကိုပြင်ဆိုက်-ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ကျေးဇူးပြုအယ်ဒီတာအဖွဲ့တွင်ပူးပေါင်း။ အသုံးများသည့်ပစ္စည်းများသာခွင့်ပြုထားနှင့်အတူနေရာချထားမြင်နိုင်၊မပိတ်မှပက်သက်အားဖြင့်၊ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်လိပ္စာမ်ား။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ပါဘူးပေါင်းထုတ်ဝေသူများကွဲပြားခြားနားသောအချက်များအပေါ်အမြင်အဖြစ်အပျက်။ အနေအထားအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအမြင်ဆောင်းပါးများထုတ်ဝေအပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်တွေးအခေါ်များ၏အယ်ဒီတာ။
ကောင်း၏ဖြစ်နိုင်မည်ခေါင်းစဉ်မှနွေးထွေး ။ ဘယ်မှာနေပူပူသဲ၊ပူနွေးလှိုင်းတံပိုး၏အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ အပေါ်ကမ်း၊နှင့်အလှဆုံးမိန်းကလေးများအတွက်ဘရာဇီးသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်နှင့်ပိုပြီး။ ခရီးစဉ်ကိုယူမှဘရာဇီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအရပ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးသည်တစ်ကီလို၊သင်ပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေအတွက်ကမ္ဘာနှင့်အိမ်ပြန်နှင့်အတူချောကလက်၊ကောင်းသောဝိညာဉ်နှင့်အတူ၊အရံအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်မေ့နိုင်သောအတွေ့ကြုံ။ ပူကခုန်၊အရသာစပျစ်ရည်ကို၊ကော်ဖီနဲ့လှပတဲ့အမျိုးသမီးဇီး၏စိတ်လှုပ်ရှ...
ဘရာဇီးအကြီးဆုံးဧရိယာနှင့်လူဦးရေအတွက်တောင်အမေရိကတိုက်နှင့်သာတူဂီစကားပြောမေရိကန်တိုက်။ အပေါ်ပဉ္စမမြောက်အရပ်တို့တွင်ကမ္ဘာနိုင်ငံများအားဖြင့်ဧရိယာနှင့်လူဦးရေ။ ဥရောပတိုက်အရှေ့ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်း။ မြို့တော်၏။ နောက်ထပ်ဗားရှင်း၏အမည် တိုက်နှင့်အတူဘရာဇီး၏။ အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများအတွင်းနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်း။ အဝေးပြေးလမ်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်-ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ရှုပ်ထွေးသော။ သို့သော်၊အချို့သောဒေသများတွင်အတွင်းအပူပိုင်းမိုးရွာသွန်းအလမ်းဖြစ်လာဖြတ်သန်းရန်ခက်ခဲများနှင့်အန္တရာ...
တစ်ချိန်ကဘရာဇီးမွဘရာဇီးမှဆောင်ခဲ့ကြ၏သင်တန်းတွင်အဆိုပါထရပ်ကားအမျိုးသားများအတွက်(မေတ္တာ၌လဲကျဖို့နဲ့အပစ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ရိုးရှင်းတဲ့)ဒီလူပျမ်းမျှဘရာဇီးအမျိုးသမီးနှင့်အစပြုဖို့သီချင်းဆို ဘယ်လိုအကြောင်းသူမသည်လှပသောနှင့်ထူးခြားတဲ့နှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်အများအပြားပိုပြီးလှပ။ အများစုကအမျိုးသမီးသူ့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေသို့မီးနှင့်ရေထဲသို့။ သောကြောင့်၊၊နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊အနည်းဆုံးတစ်စုံတစ်ဦးသတိပြုမိသည်၊တန်ဖိုး၊ကုသ၊သူမ၊စင္ဒ၊မိဖုရား။ ဒါပေမယ့်လွတ်လပ်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ:နှစ်ခုလုံး...
။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအနေဖြင့်မော်၊။ ဘတ်၊အႏွဳန္း၊စာပိုဒ္တို၊၊၊စသည်တို့ကို။ ဒီနေရာမှာသင်အလွယ်တကူနဲ့အလျင်အမြန်ဖြည့်ဆည်းမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားတွေထဲကနေယောက်ျားမရှိဘဲနက်မို့ဆက်ဆံရေးနှင့်အစည်းအဝေး။ ဘူးမှတ်ပုံတင်နှင့်သင့်အသုံးပြုသူအမည်-လူမှုရေးကွန်ရက်များ။ ဖြည့်စွက်မှတ်ပုံတင်ပုံစံနှင့်တင်ပြ၏ဓာတ်ပုံ၊မျက်နှာအသိအမှတ်ပြု။ ငါဖြစ်ကြောင်းကို ၁၈ အသက်အနှစ်။ ဂရမ်။ ဒီနေရာမှာသင်အလွယ်တကူနဲ့အလျင်အမြန်ဖြည့်ဆည်းမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားတွ...
။ ပြပွဲ၏အချိုးအဝင်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အဖြေကို။ လျှင်အနိမ့်၊အသုံးပြုသူအဖြေရံဖန်ရံခါအလျှင်အမြင့်၊ထို့နောက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေတုန့်ပြန်အများကြီးပိုမြင့်သည်။ ဓာတ်ပုံအမှတ်အဖြစ်ဂုဏ်အသာရရှိနိုင်ကြသူအသုံးပြုသူများမှသဘောတူကြည့်ရှုရန်နှိုးဆှအကြောင်းအရာ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ဦးစားပေးသင်မြင်လျှင်သင်စစ်ဆေးခြင်းအကွက်တွင်ဆှဓာတ်ပုံနဲ့၊ဒါဟာရရှိနိုင်မှသာသောသူတို့အားအသုံးပြုသူများရှိရန်သဘောတူခင္းဆှအကြောင်းအရာ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့ဦးစားပေး၊သင်သည်တွေ့မြင်နိ...
ငါရလိမ့်မယ်တက်ပြီးသွားမှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်။ ကျေးဇူးအများကြီးသင်တို့အဘို့အဗီဒီယို။ အစဉ်မပြတ်ငါဖို့မျှော်ကြည့်ရှု။ စိတ်ဝင်စားစရာ၊အဆိုတော်နှင့်ဟာသ။ သင်ဆက်ဆက်အခွက်တဆယ်ရှိ၊ဒါပေမဲ့တချိန်တည်းမှာပင်သင်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောပြောပြဖို့အကင်မရာ။ ငါစောင့်ကြည့်သင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုမှန်မှန်မပေးသောကြောင့်လူများစွာကဲ့သို့သူတို့ကို၊သူတို့ကကိုယ့်အလုပ်နေ့စဉ်အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူ၊အရာကတကယ်တော့အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဗီဒီယိုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကျွန်တော့်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ဒါကြောင့်အစ...
အသင်္ကေတများအတွက်"အိမ်"အရာက္ဇာဘား၊ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ"ဟုတ်ကဲ့"ပေါ်လာတဲ့ဝင်းဒိုး။ င်ရှိမရှိဖိလစ်ပိုင်မ-အားလုံးလူကွဲပြားခြားနားကြသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသဘောထား၊အဆိုပါပြဿနာသည်နို့စို့၏။ ကျနော်တို့ခဲ့ကြကြောင်းအများကြီးပြောနေတာရပ္ကြက္ကအငွားေဖိလစ်ပိုင်မိသားစု။ ကနေဒါတွင်၊များစွာသောသူတို့ကို၏-ဆိုေရလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အလုပ်ဗီဇာနဲ့လာကနေဒါမှတစ်ဦးထိန်းအဖြစ်သို့မဟုတ်သူနာပြု၊ရယူနိုင်ရန်အတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူအဆင့်အတန်းနှစ်ခုအတွက်အနှစ်။ အားဖြင့်စီရင်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊ငါသည်အလွန...
တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်အမျိုးမျိုးဖိုင်တွဲအမှတ်များကို၏ဆိုက်များမှဆက်စပ်ဘရာဇီး။ အများစုဟာအမှတ်များအတွက်လောလောဆယ်တွင်အမျိုးအစား)ကိုအများကြီးမှတ်အတွက်စစ်၏သဘောသဘာဝ၊မြို့များဘရာဇီးမီဒီယာ၊ဘရာဇီး။ အပေါင်းတို့၏အနည်းဆုံးအတွက်ဖိုင်တွဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ငါသည်အကျွမ်းနှင့်အတူဘရာဇီး၊ဒါပေမယ့်အသိပညာ၏ဘာသာစကားနှင့်အဖြစ်မှန်၊အစဉ်မလုံလောက်)ကြောက်သွားရန်အသံရာတွင်၊နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို၏စတိုင်၌သင်တို့အဘို့အဒီတော့လှပတဲ့ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒ။ ထို့အပြင်အမှန်တကယ်အလွန်အဆင်းလှ ñ)နှင့်အလွန်အများအပြားစာရင်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်ထူထော...
အစည်းအဝေး၏အမျိုးသားအသင်း၏ဘရာဇီးနှင့်အာဂျင်တီးနားတစ်ခုမမေ့နိုင်သောနေ့ရက်အတွက်ဘောလုံးပြက္ခဒိန်၏တစ်ဖွဲ့လုံးတိုက်နှင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ စူပါ-ဒါဘီအပေါ်အဆင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဆွဲဆောင်ကို၏အာရုံစိုက်ရာနှင့်ချီသောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပင်အခါ၊ဤအသင္းအားကစားနိုင်ငံတကာမင်။ တစ်ပါတ်ပြီးနောက်လောက၏အဆုံး၊ဘရာဇီးရှိကြောင်းကြေညာရန်အသစ်အောင်မြင်အမျိုးသားရေးအသင်းကိုဦးဆောင်မည်အဟောင်းဗိုလ်ကြီးနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီအကိုဦးခေါင်းနည်းပြ၏ဘရာဇီး၊ဒေါင်။
အကိုင္မ်ား၏နေထိုင်သူများအ မှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကောင့်ကို။ ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့လူမျိုး၏မြို့တော်ကိုရှာသောသူများအတွက်မေတ္တာနှင့်ညြတ္ျနောက်ဆုံးမှ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၈ အသက်အနှစ်နှင့်ကိုရှာဖွေချင်တယ်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု-ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳ ချစ်ကြည်ကျနော်တို့သိရန်ရချင်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအကြှနျုပျကိုအံ့အားသင့်။ ဘော အပေါ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း:ဟိုင်း၊ကျွန်မသိချင်သင့်ရဲ့ရိုးသားမှုလျှော့သဘောထားကြောင်းချင်တယ်။ ဘော အပေါ်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်ဂၤ ။ ဘော ...
၁။ ဆိုက်ရှိပါတယ်မှတ်ပုံတင်ထားသောသာအနည်းငယ်သန်းစစ်မှန်သောအသုံးပြုသူများ။ သာနေထိုင်သူများ၏-၊ထိုသို့ပေါင်းစပ်အလိုဆန္ဒအောင်မှအမျိုးသားနှင့်အမျိုးအသိအကျွမ်းတို့တွင်အခြားမြို့။ ၂။ အသစ်တစ်ခုကိုဖွားရှာ။ -ဝယ်လိုအားသုတေသနပရောဂျက်များအပြားမြန်မာဘာသာနှင့်အတူစတင်ပြင်ပဒေတာဦးဆောင်ဝါသနာရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအလားအလာကောင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေရဲ့အဆုံးမှာအစစ်တမ်း။ ၃။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊အများအပြားသောသူတို့၏နေရာအကောင့်အသစ်များရှာဖွေစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေအပြောကို၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊နှင့်အခြားတစ်ဝက်။
သင်လိုအပ်ရာက္ဇာထောက်ခံစေဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်အလုပ်လုပ်။ ကျွန်တော်သိသောစကားပြောဆိုမှုအဆုံးသတ်။ ကတည်းကကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းထားချက်တင်ဆာဗာထက်ပိုလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်က၊ကျွန်တော်တို့နားလည်ကြောင်းဤဖြစ်ပျက်ခဲ့အများအပြားဧည့်သည်များ၊ဒီအနက်ပြဿနာကိုဖြစ်စေနိုင်၊ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဆကျသှယျဖို့ဆက်လက်။ သင့်ရဲ့အဆင်ပြေစေရန်၊ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖြေရှင်းဖို့ရိွေပရိုဖိုင်း
ဗီဒီယိုချက်တင် နိမ့်အ အ)ဇြန္လဲ့ေ
သတိပြုရကြမည်ကျေးဇူးပြုပြီးနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါအသုံးပြုသူအုပ်စုလျှင်၊ဤအသုံးပြုသူသည်လိမ်လည်၊အသံုးျပဳသူမ်ား၏၊လိမ်လည်၊မု)သတိပြုရကြမည်ကျေးဇူးပြုပြီးနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါအသုံးပြုသူအုပ်စုလျှင်၊ဤအသုံးပြုသူသည်လိမ်လည်၊အသံုးျပဳသူမ်ား၏၊လိမ်လည်၊မု)မင်္ဂလာပါ၊ငါ့နာမကိုတာ။ ကြၽန္ေ ၂၀ အသက်အနှစ်။ ငါအခဲတစ်ခုတက်ကြွလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြီးလှပ။ ငါ့ဝါသနာရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်း၊စက်ဘီးစီးနှင့်ရေအောက်ငုပ်ခြင်း။ ငါအဆင်းလှသောနှင့်ပျြောရိုက်)။ ငါကဲ့သို့အသစ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖို့လူများနှင့်ကောင်းတစ်အချိန်ရှိသည်။ င...
အဘယ်မှာရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်နှင့်ကျေနပ်မှု၊ပင်ဤအိမ်ကိုဖိုင်းထဲမှာအသွင်အပြင်။ သူတို့လေးမြတ်ကြင်နာ။ ရာမရှိသည်များအတွက်။ အဲဝင်းဒိုးအတွက်မှာရှာဖွေနေ၏အရုဏ်ဘုရား။ လာကြ၊သခင်၊ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့်ရိုးရှင်း။ နှင့်နှင်းခဲ့ကြောင်းဖြူအ။ သောအပွစျရှိလောကသည်စင်ကြယ်၏၊ငါသွားအပွစျစိတ်ဝိညာဉ်၏သန့်ရှင်းစင် သာကြန္ပ်ဴတာမွညိွေပးသည္။ ပါမောက္ခဗမာစာပေ၊ဂျော့ခ်ျ မိမိတနမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၊ဒါကြောင့်အနာဂတ်ပြီးနောက်ရုတ်တရက်သေဆုံးသူမ၏ချစ်ဌး၊အဘယ်သူကိုနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့တဆယ်နှစ်။ သာတစ်ဦးပြိုကျ၏အစိတ်အပိုင်း...
သင်သားကြားရသောအမွေအများအပြားရှိပါတယ်အသံထွက်နှင့်လေ။ ထိုကွာခြားချက်အတွက်အသံထွက်၊အသံ၊အဓိပ္ပါယ်တူစကားလုံးများနှင့်အသုံးအနှု၊ဘာသာစကား၊နှင့်အခြားအကွဲပြားခြားနားမှု-အားလုံးဒီမွာအႏုပညာ၏ယေဘုယျသဘောတရားကိုပေါ်တူဂီဘာသာ။ မလွှဲဖို့ဝေးလွန်းမှအကြောင်း၊ငါပြောလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကျနော်တို့သိကျွမ်းရများထဲမှတစ်ခုနှင့်အတူအမျိုးအစားပေါ်တူဂီကဘရာဇီး။ အကြမ်းဖျင်းပြောရမယ် ဒီဘုံတူဂီ၊ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးကမြင်ရပါလိမ့်မည်ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များပေါ်တူဂီ လစ္စသို့မဟုတ်ဥပမာ၊ပေါ်တူဂီမှ ဂေါ(ဆီနီဂေါ)၊မို...
မင်္ဂလာပါ၊ငါ့နာမကိုအ ငါကျော် ၁၈ အသက်အနှစ်၊တစ်လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးများအတွက်၊ကျွန်မအနေနဲ့အသိဉာဏ်ရှိလူသား၊အနည်းငယ်ကျွံနှင့်အတူငွေရှာ:အမြင့် ၁၅၆၊မှောင်မိုက်တဲ့အစိမ်းရောင်မျက်စိ-အစရှိသည်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အလိုဆန္ဒ ငါအမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်၊အမ်ိဳး ၅၀-၅၈ အသက်အနှစ်၊ဆောက်လုပ်ဖို့တစ်ဦးယန္တရားကကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုခံစားမျှော်လင့်ပါတယ်ကကဲ့သို့များများစားစားငါပြုသည်၊တန်ဖိုးသိသူအဘယ်အရာကိုသင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ မင်္ဂလာပါ၊ငါ့နာမကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်။"အသစ်အသိအကျွမ်း)အ...
နှင့်အတူနေ့စွဲ ။ အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်အပေါ်အခမဲ့။
Тікелей бейне сұхбат сайттар, қыздармен чат рулетка қыздармен онлайн тікелей эфир
ဝဘ်ချက်တင်ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့ တွေ့ဆုံရန်အခမဲ့ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မပါဘဲဗီဒီယို ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲနှင့်အတူမိုဘိုင္းဖုန္းဓါတ္ပံု ချိန်းတွေ့အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲနှင့်အတူဓာတ်ပုံများ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့ အထီးကျန်ဆန်ချင်။